, indrindra amin’ny fotoam-pahavaratra fiakaran’ny voankazo isan-karazany toy izao. Fako, misy isan’andro io ary an-jatony taoniny no tsy maintsy esorina eto Antananarivo Renivohitra isan’andro na miaina amin’ny eo am-pelatanany aza ny kaominina, tsy omen’ny Fanjakana foibe fanampiana ara-bola na efa voatondron’ny lalàna aza ny fisian’io fanohanana ara-bola io. Manomboka voafehy anefa izany, voaalan’ny SAMVA ara-potoana ny fako. Resaka toetsaina sy ny fahazaran-dratsin’ny mponina no sisa toy ny fanariana fako ivelan’ny dabam-pako sy anaty tatatra ; manginy fotsiny ny loto avelan’ny mpivarotra amoron-dalana. Fifampitaizana sy fahatsapan-tena ny amin’io, ary ezaka mitohy. Raha te hanana ny tsara sy tontolo iainana madio anefa dia mila fandraisan’andraikitra sy fandavan-tenan’ny isam-batan’olona, ary ho mendrika ny maha renivohitry ny firenena azy Antananarivo.